जान्नुहोस्, किन दुख्छ ढाड ? - Everest Dainik - News from Nepal
जान्नुहोस्, किन दुख्छ ढाड ?
काठमाडौं, जेठ १४ । हिँड्दा, निहुरिँदा वा सुत्दा ढाड दुख्छ रु त्यसो हो भने बेलैमा सजगता अपनाउनुहोस्। तपाईंले थप दुखाइ सहनुपर्दैन ।
सबै उमेर समूहका व्यक्तिलाई यो समस्या देखापर्छ। अधबैंसे र ज्येष्ठ नागरिक यसबाट बढी पीडित हुन्छन्। बसाइको अवस्था नमिलेर वा अन्य कारण पनि ढाड दुखेको हुन सक्छ। हड्डी तथा नसा रोग विशेषज्ञका अनुसार विभिन्न पेसाकर्मीमा ढाड दुख्ने समस्या देखिएको छ। शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, कुक, बैंकका कर्मचारी, खेलाडी, सञ्चारकर्मी, किसान, भरियामा बढी मात्रामा यो समस्या देखापरेको वरिष्ठ हाडजोर्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ डा. सरोजकृष्ण श्रेष्ठले बताए। ‘उभिने वा मोटरसाइकलमा कुद्नेहरूलाई ढाडको समस्या बढी देखिएको छ’, उनले भने ।
हड्डी खिइँदा पनि ढाड दुख्ने समस्या हुन्छ। महिलामा पाठेघर, क्यान्सर समस्याले पनि ढाड दुख्ने हुन्छ। ‘कतिपय रोगका कारण पनि ढाड दुख्छ’, हाडजोर्नी तथा नसा रोग डा। सुसन वैद्यले भने। क्षय रोग, बाथ रोगका कारण यो समस्याले सताउँछ। मोटोपन भएका व्यक्तिमा पनि ढाड दुख्ने समस्या हुने गर्छ। शारीरिक श्रम गर्ने, भारी बोक्ने, माटो खन्नेलाई पनि ढाड दुख्छ। किसान, मजदुरमा पनि यो समस्या देखापरेको छ। खानामा पौष्टक आहारको कमीले पनि ढाड दुख्ने डा. श्रेष्ठको भनाइ छ। छारे रोग, दमको औषधिका साथै स्टेरोइड लिइरहेकाहरूमा ढाडको समस्या देखापर्न सक्छ ।
भारोत्तोलनका खेलाडीले लगाउने बेल्ट राम्रो नभएको अवस्थामा पनि यो समस्याले सताउन सक्छ। गृहिणीलाई लुगा धुँदा पनि ढाड दुख्ने हुन्छ। मिर्गौलाको बिरामी, हड्डी कमलो, क्याल्सियम कमी भए पनि हड्डी दुख्ने समस्या हुन्छ। डा। श्रेष्ठका अनुसार पलेंटी मारेर बस्दा दबाब मेरुदण्डमा पर्छ। बसाइको तरिका पनि मिल्दैन। यसले गर्दा पनि अन्त्यमा ढाडको समस्या निम्तिन सक्छ । शारीरिक वजनका कारणले पनि ढाड दुख्ने समस्या हुन सक्छ। कामले लामो समय उभिनुपर्ने व्यक्तिहरू ढाड दुखाइ सहन बाध्य हुन्छन् ।
ढाड दुख्ने समस्या देखिने बेला सुरुमा मांशपेसी खुम्चिन्छ। नसा खुम्चिने पनि हुन्छ। ढाडको बीचमा हुने डिस्कको समस्याले दुखाइ महसुस हुन्छ। मेरुदण्डको बनावटले पनि ढाड दुख्छ। महिनावारीपछि पनि हर्मोनको कमीले अस्टियापोरियोसिस भएर ढाड दुख्ने हुन सक्छ। ‘महिनावारी रोकिएको १० वर्षमा ढाड दुख्ने समस्या बढी देखापर्छ’, उनले भने, ‘त्यो समयमा हड्डी खिइन सुरु हुन्छ। पुरुषहरूको ७० वर्षपछि हड्डी खिइने समस्याले गर्दा ढाड दुख्छ ।’
· निहुँरिदा, हिँड्दा व सुत्दा दुख्ने
· नसा थिचिएर खुट्टा झमझम गरेर दुख्ने
· खाटमा सुतेर खुट्टा उचालिरहँदा ढाडमा दुख्ने
· पाँच मिनेट हिँड्दा पनि दुख्ने
· लामो समय फिल्म हेरेपछि उठनै धौधौ हुने
· आरामसँग बस्दा पनि झमझमाउने, पोल्ने
सबैभन्दा पहिला के कारणले ढाड दुखेको हो भन्ने पत्ता लगाउनुपर्छ। दुर्घटना भएपछि वा कुनै रोगका कारण दुखेको हो भनेर पत्ता लगाउनुपर्ने डा। श्रेष्ठको भनाइ छ। रोगका कारण समस्या भएको हो भने पहिला रोगलाई प्राथमिकता दिएर मात्र ढाडको उपचार गर्नुपर्छ। फोक्सो, प्रोस्टेट तथा पाठेघरको क्यान्सरका कारण पनि ढाडमा दुख्न सक्छ ।
ढाड दुख्नुको कारण पत्ता लगाउन रगत, पिसाबको जाँच गर्नुपर्ने हुन सक्छ। एक्सरे वा सिटिस्क्यान वा एमआरआई गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै अवस्थामा एमआरआई वा सिटिस्क्यान गर्नुपर्दैन। ‘जनमानसमा अप्रेसन गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइ छ’, उनले भने, ‘९० प्रतिशतमा अप्रेसन गर्नुपर्दैन। औषधिले ठीक नभए मात्र अप्रेसन गर्नुपर्छ ।’
· फिजियोथेरापी गर्ने
· दुखेका बेला व्यायाम नगर्ने
· वजन घटाउने
· निहुरिएर काम नगर्ने
· तातोपानीले सेक्ने वा मालिस नगर्ने
· मदिरा, धूमपान सेवन नगर्ने
· लुगा नधुने, कुचो नलाउने
फिजियोथेरापीको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। हल्का काम गर्न सकिन्छ। सकभर स्टेरोइड ओषधि प्रयोग नगर्न चिकित्सकको सुझाव छ। ‘सुरुमा औषधि खाँदा ठीक भएजस्तै हुन्छ’, उनले भने, ‘तर, साइड इफेक्ट हुन सक्छ। हत्तपत्त नखाऔं ।’ औषधि खाँदा ग्यास्ट्रिक पनि हुन सक्छ। एक बिरामीले खाने गरेको औषधि नै अन्य व्यक्तिलाई पनि दिने चलन छ। यसो गर्नु राम्रो होइन। औषधिको बनावट, डोज फरक–फरक हुन्छ। व्यक्ति र उमेरअनुसार समस्या पनि फरक हुने भएकाले एउटै खालको औषधि सबैलाई उपयुक्त नहुन सक्छ।
बिरामीले पनि ढाडबाहेक अन्य समस्या के छ भनेर चिकित्सकलाई खुलस्त भन्नुपर्छ। अकुपन्चर, म्यानुअल थेरापी, क्रायोथेरापी, हाइड्रोथेरापीले पनि ठीक हुन सक्छ। तर, बिरामीले तीन÷तीन महिनामा चिकित्सकलाई देखाउनुपर्छ। व्यक्तिको तौल, रोगका आधारमा चिकित्सकले औषधि दिने भएकाले आफूखुसी गर्नु हुँदैन। ढाडको हड्डी खिइए उमेरअनुसार क्याल्सियम खानुपर्छ । यो समाग्री अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट लिइएको हो ।
· बिहान हिँडडुल गर्ने
· योग गर्ने
· पौडी खेल्ने
· एउटै पोजिसनमा ४५ मिनेट बस्ने
· एउटै पोजिसनमा एक घण्टाभन्दा बढी नबस्ने
· मेरुदण्डलाई सहज हुने गरी बस्ने
· मोेटरसाइकल चढ्दा कुप्रो नबस्ने
· लामो दूरीमा सुतेजस्तो गरी नबस्ने
· लामो समय खुट्टा झुन्ड्याएर नबस्ने
· लामो यात्रामा एउटै पोजिसनमा नबस्ने